Sehatra fanodinana fako eto Madagasikara Manome asa ireo vehivavy sahirana
Omaly alarobia 28 novambra no nanatanteraka ny fivoriana faharoa tetsy amin’ny minisiteran’ny tontolo iainana tetsy Antsahavola ny mpikambana tao amin’ny ADDEV (Agir pour le Développement Durable et l’Economie Verte).
Nanao jery todika sy namelabelatra ny zava-bita nandritra ny enim-bolana farany tamin’ity taona ity ary nanao tombana ny zavatra hatao amin’ny taona 2019 izy ireo. Raha ny amin’ny zava-bita dia efa nisy ny fifanaovan-tsonia niaraka tamin’ny minisiteran’ny tontolo iainana tamin’ny volana septambra lasa teo nahafahana nampirisika bebe kokoa ny mpikambana izay miisa 50 eo ho eo hirona tanteraka amin’ny fikajiana ny tontolo iainana. Mitohy ihany koa ny tetikasa fanavotana sy ireo fanofanana ny mpikambana handinihina hatrany ny hoavin’ny ADDEV sy ahafahana misitraka ny tetikasa lehibe maneran-tany Green Climate Fund (GCF). Tamin’izany indrindra dia nisy mpikambana 2 tao amin’ny ADDEV nahazo ny certification ISO 26000. Tsiahivina ihany koa fa ny tetikasa fanavotana dia fanampiana ireo vehivavy sahirana anatin’ny fokontany miisa 8 eto Antananarivo. Orinasa 26 no manampy ireo vehivavy sahirana amin’ny alalan’ny fanomezana azy ireo ny taratasy sy gazety tsy ilain’ny orinasa intsony. Miteraka asa ho azy ireo izany satria ireo taratasy sy gazety ary ny tavoahangy tsy miasa voaray dia mbola ahodin’ny tompon’andraikitra ho lasa zavatra hafa azo ampiasaina sady mitera-bola.